Russia idume izingcweti zayo, uyakwazi nje izandla zabo ukulungisa imoto, kodwa futhi ukuthuthukisa nokukhiqiza imishini okuzenzela abakhasi.
Umqondo eyodwa - amathrekhi self-ezenziwe. Kodwa ukuze ngiwuhlakulele wasebenzisa izindlela ezingafani ezisetshenziswa kakhulu futhi izixazululo. Nokho, kuyinto ukudalwa amacimbi kakhulu iletha asemrarweni abathanda. Abaningi kulokhu, iphendukele ukuxazulula indlela elula: inzuzo eyenziwe idivayisi iphinde ogibele imoto unqamule izwe. Kodwa uzovuma, akukho nicer kuka ukubeka umbono wabo ku umkhuba ngezandla zabo, kuhlanganise imikhiqizo yabo siqu futhi kudivayisi yakho imoto. Okulandelayo izoba ezinye zezindlela eziphumelela kakhulu okwenza amacimbi ngesandla.
ithrekhi Homemade ngoba snowmobile noma edonsa ngawo wonke amasondo imoto kokuba isisindo encane zingenziwa ngesisekelo isihlahla roller iketango ibhande elula. Futhi ukwenza kube silula, asikho isidingo ukuthenga ithuluzi ekhethekile.
Ukuze uthole ithrekhi esikhashana enjalo ihlala isikhathi eside, kubalulekile ukuba ukukhanya emaphethelweni lesikafula ibhande. Isinyathelo - mayelana isentimitha. Le nqubo kuyokusiza ukuba uvikele tape kusukela "razlohmachivaniya". Kodwa ixhume iringi kungaba yisiphi ofanele futhi ezingabizi ngawe. Ngaphansi ethembekile - is nje thunga emikhawulweni iribhoni. Ngokuvamile belulekwa ukusebenzisa lomnyango ngohlobo upiyano kokuhlanganisayo.
Kodwa ukushuba tape kuncike amandla injini ogibele lihamba. Ukukala kusuka 8 kuya ku-10 mm kungafaneleka uma usebenzisa injini kusukela isithuthuthu yasekhaya.
Idivayisi, wenza ngendlela efanayo, ubizwa kuhambisana kahle isebenze snowmobile. Plus, ithrekhi enjalo esikhashana futhi kulula ukulungisa, futhi esikhundleni uma umonakalo. Lokhu lula kakhulu inqubo ukuxhashazwa okusungulile.
izingcweti eziningi ezenziwe okusezingeni eliphezulu permeability lithathelwe amathayi. Ngenxa yale njongo kungcono ukuthatha isondo phezu imoto nazo zonke izimpahla isici yimpandla iphethini.
Kungenziwa kanjani wenza ithrekhi okuzenzela? Tyres kumele kusetshenzwe. Ngenxa yalesi nginqume buhlalu, kanjalo kusale kuphela tape "treadmill". Le nqubo idinga amandla kakhulu, ngoba isikhathi esiningi futhi kanzima ngokwanele.
Ukuze iwenze ube lula ukusebenza, kungenzeka imanzise blade ummese isixazululo insipho, okuyinto enomthelela i ahlabayo kulula injoloba. Uma kuphela kudivayisi eyodwa kube nzima, ungasebenzisa i-jigsaw kagesi nge esihle-toothed.
Uma nginqume bead isondo esuswa uhlangothi olungafanele, uma kunesidingo isendlalelo. Khona-ke ungakwazi ukusika enye, ukwanelisa wena Lug isakhiwo.
Lokhu isibungu okuzenzela kunezinzuzo ezinkulu phezu ukuthi kuchaziwe ngenhla. It has a evaliwe iluphu Esekelwa nokwethembeka ke ephakeme. Lokhu kuqinisekisa ukuphepha kanye nesikhathi operation owengeziwe.
"Volvo 240": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nezithombe
Ingabe uyazi ngezwe lapho imoto eshibhe eRussia?
Mazda 6: imvume, incazelo kanye nokubuyekeza
Le filimu "inzavula": nabalingisi, inkinga lekhona endzabeni, ukugxeka
Ukwelashwa osteoarthritis futhi indima Physiotherapy
Nezimboni nakancane eNtshonalanga kanti eRussia